Ziziphi iiphakheji ze-SEO ezifanelekileyo zokuhlangabezana neenjongo zam ishishini ngokupheleleyo?
Masibhekane nayo - ngamanye amaxesha senza ukhetho olufanelekileyo phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zokubonelela ukubonelela ngeenkonzo zokubonelela bonke ababenokuphela "kwee-packages ze-SEO ezifanelekileyo. "Kodwa ungayifumana njani ngokufanelekileyo? Njengoko kungathatha ixesha elininzi, kuchitha nje ukuphequlula ngeendlela ezininzi kunye neenkampani zokwenza umsebenzi. Kwaye kuya kuba ngumsebenzi onzima kuwe, ndifanele ndivume, kuba namhlanje, phantse yonke ibhizinisi eline-intanethi ibhajethi ngokubhekiselele kwiithagethi ezizimeleyo kunye nezinto ezikhethiweyo-ukuba zonke zizenzeke kwiipakethe enye. Kodwa apha kuza iqela leendaba ezilungileyo - arcelik yetkili servis iletisim. Ndikunika uluhlu olutshanje lweengcebiso ozifumana luncedo xa wenza ukhetho olugqibeleleyo phakathi kweephakheji ze-SEO ezilungileyo.
Ngokuqhelekileyo, siza ngaphaya kweentlobo ezimbini zokunikezelwa, nokuba ngumgangatho oqhelekileyo okanye ngamnye. Kubonakala ukuba izisombululo eziphambili aziyi kusebenza njengeiphakheji ze-SEO ezifanelekileyo. Nangona kunjalo, basasaza ezinye iingenelo ezifanelekileyo, ubuncinci phakathi kwendlela efanelekileyo yokusebenza. Okokuqala, izibonelelo eziqhelekileyo ziza kwixabiso elinqinileyo, libandakanya uluhlu oluthobekileyo lwemisebenzi yokwenza umsebenzi, ekwazi ukukunika iziphumo ezithile ekuphakanyisweni kwendawo. Ke mna, ndiyakholelwa ukuba iikontraki ezisisiseko azikude zibe ziingxaki ezilungileyo, kodwa zisuka ekamelweni lakho inkqubela phambili. Ukuba ungumcebisi we-intanethi, mfumana nje okokuqala ngethuba lesilingo kwaye ube nesiqalo esihle ngokuqonda izinto ezisisiseko zeNjini yeeNjini zoPhando.
Iiseti ezizimeleyo zokuncedisa uphando kumnikezeli othembekileyo, ngencazelo, mhlawumbi iiphakheji ze-SEO ezifanelekileyo.Ewe, ukuqhuba i-website yakho ukuphakanyiswa kwendawo kunye neeseti ezincinci zeenkonzo kuncono kunokuba ufumane ngaphandle kwanto nantoni na, akukho mfuneko yokuthetha. Kodwa ndikholelwa ukuba ukukhangela iinkonzo ze-SEO kunye nokunikezela indlela yokufumana izicwangciso ezinokwenziwa ngokufanelekileyo kwenkqubo yokucwangcisa uphendlo olude kakhulu kude nesigqibo esenziwe kakuhle. Ewe, inkonzo eyenziwe ngumntu izakubiza iphakamileyo, kodwa ukuphuculwa ngokucwangcisa iinjongo zoshishino kunye nokulawulwa ngokuchanekileyo ngeqela elipheleleyo lokuthengisa idijithali ngokuqhelekileyo kubonisa ukubuyela ngokumangalisayo kutyalo-mali (ROI).
Kaloku, ndicinga ukuba ngoku sihamba phambili, njengoko zonke izinto ziqwalaselwe kuwe ukuba uthathe isigqibo malunga nendlela yokuqhuba ukuqhubekiswa kweenjini zokukhangela kunye nokuba yeyiphi umboneleli wenkonzo ukudibana ne. Ingcebiso kuphela endinokukunika yona ngokukhawuleza ngokugcina iso lakho kwinto oyifumanayo. Kwaye umbuzo apha awukho malunga namanqaku entengo okanye ixesha lokuchitha. Ukuchaneka kokuchaneka kokuchaneka kunokukhawuleza ukuqhubela iprojekthi yakho ye-intanethi kwi-intanethi ezinzileyo nehlala njalo. Enye indlela ejikelezayo, ukwenza kwakho ukuthengisa kungathatyathwa kukuphazanyiswa ngokungabonakali ngabathengi bakho abanakho. Yingakho ungalokothi unganqikaze ukwenza isifundo ngokujulile kwaye ujonge kabini kwiiphakheji ze-SEO ezilungileyo oza kuba nazo kwishishini lakho.Hlala uqhubeka xa ukhangele kuyo yonke imimandla yenkqubo yonke yokucwangcisa ukucinga obeka phantsi kwengqwalasela - ukususela kwiinkonzo eziphambili njengophando lwegama elingundoqo, ukubhala kokubhaliweyo komgangatho, nokubhala uludwe lwemibhalo, kwindlela yokugcina ilungelelwano olusebenzayo njengendlela yokulandelela, i-analytics, iblogi ukuthumela, njl.